प्रचण्डले थाले यस्तो तयारी, नेकपाको सचिवालयले यी मन्त्रीलाई हटाउन सक्छ ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिजो मात्रै सरकारको गति सन्तुलन बिग्रेको भन्दै गियर बदल्ने जनाएका थिए ।
गियर बदल्दा सम्म काम नगरे गाडी नै बदल्ने बन्दै दिएको सनसनीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण नेकपाको आज हुने भनिएको सचिवालय बैठकमा व्यापक चर्काचर्की पर्ने स्रोतको दावी छ ।
प्रचण्डले मुख खोलेपछि हाैसिएका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रचण्डलाई सचिवालय बैठक अगाडी केहि समय भेट्ने इच्छा जाहेर गरेको र प्रचण्डले समय मिलाएको खुल्न आएको छ । स्रोतका अनुसार नेता नेपालले प्रचण्डलाई हातमा लिन सके मात्रै आेलीका लागि ठूलै दबाब बढ्ने छनक पाइसकेका छन् ।
आज हुने भनिएको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले आफ्ना असन्तुष्टीको पोको तयार पारेर लिखित रुपमै आफ्ना कुरा गर्ज गर्न सक्ने स्रोतको दावी छ । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले भने माैखिक रुपमै कुरा राख्न भनेकाले स्थिति हेरेर अगाडी बढ्ने तयारीमा नेता नेपाल जुटेका छन् ।
गियर बदल्ने जनाएका प्रचण्डले अहिले पाटपुर्जा परिवर्तन गरेर हेराैं न भन्दै केहि थान मन्त्रीहरुलाई स-सम्मान विदाइ गर्ने तयारी थालेको समेत स्रोतको दावी छ । यसरी अपदस्त हुने मन्त्रीहरुको नाम भने खुलाइएको छैन् ।
तर, स्रोतका अनुसार उद्योगमन्त्री मातृका प्रसाद यादव, गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ र अन्य केहि मन्त्रीहरु रहेको जनाइएको छ । पार्टीमा अर्थमन्त्रीको समेत विकल्प खोजिनुपर्ने आवाज उठेपनि आेलीका विशेष मान्छे भएका कारण उनलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने स्रोतको दावी छ ।
अराजक नबन्न नारायणकाजीलाइ यस्तो चेतवानी
धर्म परिवर्तन गराएको अभियोगमा प्रधानमन्त्री आेली विरुद्ध प्रहरीमा मुद्धा दर्ता !
नेकपाको सातै प्रदेश कमिटीका सदस्यको नाम टुङ्गो लाग्यो !